အပတ်စဉ် တနလာင်္နေ့တိုင်း သံဃာအပါး(၄၀၀ )ကျော် အား အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းများ ဆက်ကပ် လောင်းလှူ လျှက်ရှိသော မေတ္တာရှင် ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ ၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်းသို့ မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော်အရှင်ဇ၀န မှ ရာသက်ပန်ငွေပဒေသာပင် စိုက်ထူရန်အတွက် အလှူငွေ (၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်)ကို မတည်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာမှ စေတနာရှင် အလှူရှင်များအနေဖြင့် မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်းသို့ ရာသက်ပန် ငွေပဒေသာပင်တစ်ခုလျှင် အလှူငွေ (၅၀၀၀၀ ကျပ်) ဖြင့် ပါဝင်လှူဒါန်း ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးဆော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
၄.Dr.မြတ်ဥာဏ်+ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း၊သမီးလေး-မေမြတ်နိုးခိုင် မိသားစု(၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၇.ကိုငြိမ်းတေဇထွန်း(စင်္ကာပူ)(သြဂုတ်လမှလစဉ် 50 SGD)
၈.ကိုအောင်မြင့်ဦး+မမေသဇင်အုန်း၊သား-Matthew မိသားစု(စင်္ကာပူ)(600SGD)(၃၈၇,၆၀၀ ကျပ်)
၉.ဦးမြင့်သူ+ဒေါ်မွှေးမွှေးကြူ ၊သမီးလေး ဇင်မွန်ထက် မိသားစု(ကနေဒါ)( ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၀.ကိုမျိုးဦး+မခိုင်ခင်ဝင်း(စင်္ကာပူ) အလှူငွေ( ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၁.Mr.Koyanagi + မသင်းသင်းနိုင် ၊သား HIROAKI မိသားစု (ဂျပန်) ( ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၂.ဦးမျိုးသိန်း နှင့် alor gajah ,malacca , malaysia မှ မြန်မာလုပ်သားများကောင်းမှူး။ ( ၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၁၃.ကိုဇင်လင်းဇော် + မသက်မာ (စင်္ကာပူ) (စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀ )
၁၄.ဒေါ်အေးအေးဝင်း အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစုကောင်းမှူး။ (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၁၅.ကိုခင်မောင်အေး+မတင်ညိုလင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) မှ ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ကိုခင်မောင်အေးမွေးနေ့အလှူ(၆၄၅၀၀ ကျပ်)
၁၆.မယွန်းရတီလှိုင် (နန်းထိုက်ဖုန်းအပိုပစ္စည်း နှင့်အရောင်းဆိုင် ၊ မလေးရှား) ( ၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၁၇.ဦးကိုကိုနိုင် + ဒေါ်မြင့်သဲစုစံ + သားသား မောင်ဇွဲလုလင်နိုင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (၁၅၀,၀၀၀)ကျပ်။
၁၈. ဦးချစ်ထွန်း + ဒေါ်အိနန်း တို့အားရည်စူး၍ မစန်းစန်းခိုင် (စင်္ကာပူ)(၁၀၀,၀၀၀) ကျပ်။
၁၉.ကွယ်လွန်သူဖခင် ဦးတင်အောင် နှင့်မိခင်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ရီတို့အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု(ထိုင်းနိုင်ငံ) (၁၀၀,၀၀၀)ကျပ်
၂၀.ဦးဇော်သောင်း+ဒေါ်အေးသန်း မိသားစု (စစ်ကိုင်းမြို့) ( ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၂၁.ဦးကျော်ဝင်း +ဒေါ်စီလာ မိသားစု (ပြင်ဦးလွင်မြို့) ( ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၂၂.ရွှေလမ်းငွေလမ်းဝင်းကြည် ( ၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၂၃.ဦးသာဥာဏ်+ဒေါ်အေးအေးမြတ် မိသားစု(တောင်ကြီး) (၃၀၀၀၀ ကျပ်)
၂၄.ကာယကံမေတ္တာရှင်အဖွဲ့(မန္တလေးမြို့) (၁၉၀,၀၀၀ ကျပ်)
၂၅.မရွှန်းလဲ့ပြည့်(၅နှစ်)ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။(ရန်ကုန်)(၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၂၇.ကိုထွန်းထွန်း(စင်္ကာပူ) (၇၀၀၀၀ ကျပ်)
၂၈.Dr.ညီညီကျော်+Dr.ဖူးပွင့်ဟန်(USA) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၂၉.ကိုသက်နိုင်ဦး+Dr.နှင်းဝတ်ကြည်၊သား-မင်းသစ်ထွန်း မိသားစု(ထိုင်ဝမ်) (၁၀၀၀၀၀ ကျပ်)
၃၀.ဒေါ်ခင်မြမြ (ထိုင်း) (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၃၁.ဒေါ်ခင်လေးကြူ (ထိုင်း) (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၃၂.ဒေါ်ခင်လေးဖြူ (ထိုင်း) (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၃၃.ဒေါ်ခင်လေးမူ (ထိုင်း) (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၃၄.ဒေါ်ခင်လေးမေ (ထိုင်း)(၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၃၅.ဦးကိုကိုမောင် (ထိုင်း) (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၃၆.Mr.Steven+Ms. Sydney ,သား-AJ , သမီး-EVA (ထိုင်း) (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၃၇.ဦးတင်ထွန်း+ဒေါ်ညွန့်ညွန့် မိသားစု(၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၃၈.မိဘများကိုအမှူးထား၍ မအေးမွန်သန့်(စင်္ကာပူ)၏ (၂၃.၉.၂၀၁၁ မွေးနေ့အလှူ) (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၃၉.ဦးချစ်အေး+ဒေါ်တင်တင်ရီ ၊သမီး-မသန္တာဦး၊မဖြူဖြူခိုင်၊မအိအိခိုင် မိသားစု (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၄၀.Dr.ကြည်ချိုအောင်(ရန်ကုန်) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၄၁.ကိုဆန်းမော်+မအေးမွန်ထွန်း(ဂျပန်) (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၄၂.သာသာယာယာ(မန္တလေး) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၄၃.ရွှေမြန်မာဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းဆိုင် မိသားစု(မန္တလေးမြို့) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၄၄.မအေးဇာနွယ်(စင်္ကာပူ) (၁၀၀,၅၀၀ ကျပ်)
၄၅.ကိုကျော်သူရ (စင်္ကာပူ) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၄၆.ကိုဇော်လင်းထူး+မကျော့ကေသွယ် မိသားစု(ရန်ကုန်)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၄၇.ကိုမင်းသူရိန်+မသဇင်၊သား-မင်းသန့်ကျော်(Ah Boy)၏ (၇.၉.၂၀၁၁)မွေးနေ့အလှူ (စကာင်္ပူ) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၄၈.ဦးကိုကိုမောင် + Dr.ဇာခြည်လဲ့ ၊သမီး-ဆုပြည်ရွှေစင်၊ဆုလဲ့ရွှေစင် မိသားစု(ရန်ကုန်) (စက်တင်ဘာလမှစ၍ တစ်လ ၅,၀၀၀ ကျပ်)
၄၉.ဦးစိုးဝင်း+ဒေါ်ခင်နှင်းအေး၊သား OSCAR (USA)(၅၀၀,၀၀ ကျပ်)
၅၀.စေတနာရှင်တစ်ဦး(90SGDx588k) ( ၅၂,၉၂၀ ကျပ်)
၅၁.ဦးဂျင်မီစိုး မိသားစု (ရန်ကုန်) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၅၂.မဖြူမေဇင် (စင်္ကာပူ)၏ (၈.၁၀.၂၀၁၁)မွေးနေ့အလှူ
၅၄.Dr.ဖိုးသော်တာ၊Dr.မေရင်ရင်သန်း၊Dr.သွဲ့သွဲ့ ၊ Dr.ခင်သန်းနွယ်၊ Dr.ခင်သန်းမြင့် မိသားစု (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၅၅.ဦးခင်အောင်တင်+ဒေါ်ခင်ခင်ဦး ၊သား-မောင်ကောင်းဆက် ၊ သမီး -မသက်စန္ဒီ မိသားစု (စင်္ကာပူ) ( 200 SGD)
၅၆.ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီးအား ရည်ဇူး၍ ကိုဇော်သိင်္ခ (မန္တလေး) (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၅၇ကိုမျိုးသန့် + မမြင့်မြင့်အေး၊ သမီး မညွှန်းအိမ်စည်မျိုး (စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မည့်ကိုမျိုးသန့် ၏ မွေးနေ့အလှူ) (100 SGD)
၅၈.ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း(ရွှေပြည်သာ) ၏ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၂ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော မွေးနေ့အလှူ (၁၆၀၀၀၀ ကျပ်)
၅၉.ဦးညိုသန့်+ဒေါ်အေးအေးဝင်း၊သား-မောင်ဥာဏ်လင်းဦး၊သမီး-မစုလှိုင်ဦး (ရွှေပြည်သာ)မှ (၂၀၀၀၀၀ ကျပ်)
၆၀.ကိုကျော်သူရ (စင်္ကာပူ)၏ စက်တင်ဘာ၂၉ ရက်မွေးနေ့အလှူ (၁၀၀ ,၀၀၀ ကျပ်)
လစဉ် အလှူငွေတစ်သောင်းနှုန်းဖြင့် (၁၀ လ) လှူဒါန်းမည့် အလှူရှင်များစာရင်း-
၁။ ကိုကောင်းစိန်+မအေးမွန် (မန္တလေး)
၃။ ဦးကျော်ဝင်း+ဒေါ်ကြင်ကြင်မြိုင် (မန္တလေး)
၇။ ဦးစီကွမ်း+ဒေါ်အေးအေးသိန်း (မန္တလေး)
၉.ဦးသောင်းဌေး+ ဒေါ်ခင်ထွေး (မန္တလေး)
၁၂.ဦးထွန်းဝေ မိသားစု (ခန္တီး)
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း ရာသက်ပန် ငွေပဒေသာပင်အတွက် အလှူငွေများလှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ အလှူခံမောင်နှမများထံသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။
ဦးကောဝိဒ (စစ်ကိုင်း) kovida 9@gmail.com
Ph: 009592110202 / 009511290362
ကိုဇော် (မလေးရှား) zaw357@gmail.com
နန်းဝါဝါမောင် (ရန်ကုန်/ဂျပန်) nanwarwarmg2009@gmail.com
ကိုဇော်မြင့် (မန္တလေး) kozawmyint@zawtk.com
အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ ဆွစ်ဇာလန်စသောနိုင်ငံများရှိ ဘဏ်များသည် အာမခံ မည်မျှပေးပေး ကမ္ဘာပျက်ပါကအတူတူလိုက်ပျက်ရမည့် ဘဏ်များသာ ဖြစ်သည်။ ဒါနဘဏ်တိုက်၌ အပ်ထားသောကုသိုလ်ဥစ္စာများကား ကမ္ဘာ ပျက်သော်လည်း မပျက်ပေ။ သံသရာတလျှောက် ကုသိုလ်ပြုထားသူနောက်သို့ တကောက်ကောက်လိုက်၍ ကောင်ကျိုးပေးနေမည်သာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် အသက် နှစ်ဆယ်အရွယ် စာသင်သားဘ၀က ၀က်သားဟင်း တခွက်ကို စာသင်သားတစ်ပါးအားလှူဒါန်းပြီး ဒါနဘဏ်တိုက်၌ ကုသိုလ်ဥစ္စာများကို အပ်နှံခဲ့သည်။ ထိုကုသိုလ်ဥစ္စာများသည် ယခု အသက် ၄၇ နှစ်တိုင်အောင်သုံး၍ မကုန်တော့ပေ။ ၁၃၇၃ခုနှစ် သင်္ကြန်တွင်းတရားစခန်း၌ ယောဂီ သုံးထောင့်တစ်ရာကျော် ၀င်ရောက်အားထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုယောဂီများအတွက်ခုနှစ်ရက်စာ အရုဏ်ဆွမ်း၊ နေ့ဆွမ်းများကို အလှူမခံဘဲ သူ့အလိုလိုလာလှူကြသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ဆူနာမီ ရေလှိုင်းများဝင်ရောက်ခဲ့ရာ မြို့ကြီးနှစ်မြို့ကွယ်ပျောက်ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ မလှူရ မတန်းရသေးသော ဥစ္စာစည်းစိမ် တိုက်တာခြံမြေအားလုံးရေလှိုင်းတွေထဲ ပါသွားခဲ့သော်လည်း ဂျပန်လူမျိုးများ ပြုထားသည့်ကုသိုလ်ဥစ္စာများသည်ကား မပျက်မစီး ထာဝရတည်မြဲလျှက် ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သံဃာများကိုဆွမ်းလောင်းလှူခြင်းဖြင့် စိတ်ချရဆုံး ဒါနဘဏ်တိုက်၌ ကုသိုလ်ဥစ္စာများကိုအပ်နှံသင့်ကြ ပေသည်။
အားလုံးပဲ အလှူရှင်တို့နှင့်အတူ ကြည်ညိုသဒ္ဓါပွားများ ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ...